Lokhu amakha Swedish ekhiqizwa, njengazo zonke amakha abakhethayo, editions limited ukuba mass, ngokuvumelana umbhali, hhayi "ukubulala" iphunga elimnandi. Brand wadala engu-10 edlule, uye kakade yanqoba okudaliwe lazo elingajwayelekile emhlabeni wonke. Zonke imimoya bevalela e amabhodlela okufanayo ilebula esikhulu esimhlophe, ngakho akukho lutho ekuphazamisayo kusukela okuqukethwe elimnandi.
Kufanele ukuthi umlando sha Byredo ayiqalanga ngomoya futhi lapho kukhululwa amakhandlela ezakheke ehlukahlukene, sicela bonke abathengi ukubukeka zikanokusho futhi kungabonakali ibhokisi lohlu olwehlisiwe iphunga ekamelweni. Ukuze abaseSweden abaningi akuzona ezishibhile, kodwa ikhandlela engavamile kakhulu abe yisipho esihle kakhulu.
Ngemva kwalokho, Ben Gorham, umsunguli perfume brand, wahlanganyela ukukhululwa lemimoya, ethi kwakungeyona nje amakha "isimo ngenxa yomphefumulo wakhe." Ngakho, kwakungekho ndlela yakhe, kungekho ukukopisha eyodwa nokudala imisebenzi engavamile, inkampani "Bayredo" kuphela. amakha Brand ikakhulukazi yokuqala, futhi abalandeli ngesithakazelo esikhulu amaqoqo entsha njalo wamukelekile.
Senkululeko kanye sengqondo oluhlukile lokuphila eshiwo ku umsunguli Tattoos Byredo, okubenza babe kusukela zisencane futhi ngeke siyeke. Lapho uBen wasicela uma wayengeke akwazi ukukhulula ukugeleza ngephunga zabo, waphendula kule negative futhi wanezela ukuthi kuleli cala imikhiqizo yayo for ukuphahlazeka yangempela. UMdali sha kufika nge nomqondo izingoma zakhe, futhi eyisebenzisa bamakha owaziwa - UJerome Olivia Epinett Dzhakobetti.
Sicasulwa M / Mink
Ukwenza Ukugcizelelwa kumagazini wokuqala amakha zabesifazane, sha "Bayredo" kabani omoya imifanekiso wangempela isitayela, kamuva ngokuphumelelayo kudingeka uqale ukukhiqizwa kanye namakha zabesilisa. Ngonyaka ka-2010, umhlaba wangena emelelwa M / Mink, libé abaningi bashaqeka futhi ukushaqeka. Flavour, ngokuvamile kuchazwa ngokuthi "ongaziwa", futhi kwaheha futhi wasiqhelisa. Kusekelwe nephunga engavamile inki, ukuvula umkhiqizo eseqedile ngokuyisimangaliso.
I-molecule zokwenziwa eye nzima amanothi ukuvezwa iba sicasulwa yangempela emhlabeni amakha. Perfume, eklanyelwe ukwethusa, ngiye ngazuza abalandeli babo abaqotho, nakuba abaphikisi abe nokuningi kakhulu.
Imimoya "Bayredo" "umdanso Afrika"
Kodwa mhlawumbe ethandwa kakhulu Iphunga brand Bal D'Afrique, ukubamangaza abalandeli saturation uhlobo imibala. Uniseksovaya Ukwakheka kuyinto exakayo yemiqondo namagama ezomthetho elingavamile Afrika namasiko French. Ben uye waqaphela umbono Afrika exotic ashisayo, imidwebo Amazing kakhulu esikhundleni, njengoba uma ingxubevange.
imfihlakalo Izimbali Ezikhangayo yezwe ezikude kuhlobene eduze Paris ukuthula-yalolucwaningo 20 ekhulwini elidlule leminyaka. Isibhakabhaka Ebukekayo ngenkathi amabhola odlula ngendlela elicwengiweyo ngokuhlanganiswa imibala enobudlova lamathafa ashisayo.
Ekhululekile bok amanothi ukucwila e Velvety violets elithambile, inhlaka heady teases Amacebo elinambitheka sashukela kanye jasmine esobala umsindo ithenda inhliziyo. Ukuhlolisisa ukunambitheka isekelwa umsindo umsedari omkhulu eyindoda, ngibunjwa nge vetiver Smoky, esigubuzele itshali esithambile.
ethengwa kakhulu elimnandi
Imimoya "Bayredo" "umdanso Afrika", ukubuyekezwa zazo zigcwele imizwelo bhá, owawusekelwe ingoma yothando, eyaba ethengwa kakhulu isikhathi eside kule amakha. Abaningi bathi isisa ekhethekile amandla ukunambitheka engavamile, amanothi elikhazimulayo efudumele futhi piercingly abandayo ngesikhathi esifanayo, okuyinto kwakha nomphumela imilingo. Imimoya bayathandeka ngokulingana besifazane kanye namadoda, okuyinto ngezindlela eziningi kuyadalulwa abakhethayo Iphunga brand.
iphrojekthi Private okuyinto lithole ukuthandwa
Ngu Christmas 2012 edition elinganiselwe kudedela Iphunga amasha njengesipho nozakwethu brand "Bayredo". Imimoya 1996 Inez & Vinoodh abe iphrojekthi yimpumelelo kakhulu, udumo zokhuni-iris Ukwakheka uya kubantu, futhi inkampani unqume ukukhipha siliphunga bonke abalandeli babo.
Lokhu Iphunga emangalisa ngamanothi evelele of nogologo "Bayredo" liphefumulelwe umsebenzi abangane umthwebuli wezithombe, ukuziqhayisa isifinyezo entsha sentombazane enhle Wavala amehlo akhe ilindele Magic. Isithombe ngesikhathi esifanayo ngokuhlanganisa ngokuthinta ingane kanye ukuzwa ekhethekile, kwaba umfutho ngokudala ukunambitheka ngokomzwelo, okuyinto komculo ukusabela kokuqala kuya zezithombe ezimangalisayo bamakha brand "Bayredo". Imimoya ukuvula cishe eqandisiwe amajikijolo zokhuni, futhi udluliselwa kumnikazi omusha we uhambo elimnandi, okuyinto egcina ngezinhlamvu esithambile lesikhumba kuzithinta amanothi patchouli nokubhema.
Ngaleso sikhathi, ukuphila zamabhasi, kuphela nephunga elithakazelisayo, ungavumeli umninikhaya ngeminithi. Ekuqaleni egqamile futhi ukukhala, uqala ukulahlekelwa Uhlonze lwalo, futhi base yisikhumbuzo cishe ghostly ngokwawo mayelana nomsebenzi owenziwayo uhambo olfactory.
Abahlukile amakha brand "Bayredo" kabani imimoya Ihlanganisa flavour yemvelo, kudala ekudalweni alulona olwawo wonke umuntu. Kufanele uzame futhi baqonde ifilosofi brand, ngikholwa ukuthi inkululeko kuzo zonke ukulinganiselwa - okubaluleke kakhulu ezihlukanisile nomphakathi. Wathi umqondo onjalo futhi benamandla ngokoqobo wonke amaqoqo niche brand ivelele nenqwaba ubuntu zokudala.
Fluid for ugwayi electronic Ecoliquid - izinga European nokunambitha ukumelana
Isipho upapa ngezandla zakhe. Ungacabanga, uma ubaba - Umshayeli
Lapho wathwebula ochungechungeni TV "Ikhishi"? Lena yokudlela yangempela
Starter "iNsephe": ukungasebenzi kudivayisi, ukulungisa
Ubuhlungu entanyeni ngakwesokunxele: i izimbangela
Frozen nezimfanzi ehlutshiwe: indlela ukupheka? Ukupheka Tips